သက်တန့်ချို: ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေတဲ့ ၅၅ ပေရှည်သော မြွေကြီး
တရုတ်ပြည် တောနက်ထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ၅၅ ပေရှည်တဲ့မြွေကြီးဟာ ယနေ့အချိန်မှာ ခေတ်အစားဆုံး သတင်း တပုဒ်ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီ ။ ဒီသတင်းကို မူရင်းစတင်ခဲ့တာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ Official Communist Party သတင်းစာဖြစ်တဲ့ People's Daily ရဲ့ သတင်း website မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် ။
" တတိယ အကြိမ်တူးလိုက်တဲ့အခါ အော်ပရေတာက မြေကြီးတွေပေါ်မှာ သွေးတွေကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ပြီး တော့ ဆက်ပြီးတူးလိုက်တဲ့အခါ သေနေတဲ့ မြွေကြီးကိုတွေ့ရတာပါပဲ " လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ် ။
" အဲဒီတချိန်တည်းမှာပဲ ရွှေရောင်အဆင်းရှိတဲ့ နောက်မြွေကြီးတကောင်က ပါးစပ်ကြီးဟပြီး ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်.. ကားမောင်းသမားဟာ ကြောက်လန့်လွန်းတဲ့အတွက် အလွန်ကို တုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ် တခြား အလုပ်သမား တွေကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီ .. အချိန်အတော်ကြာလို့ အလုပ်သမား တွေ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ မြွေကြီးကသေဆုံးနေပါပြီ ဒါပေမယ့် နောက်မြွေကြီး တ ကောင်ကတော့ တောထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ် မြေတူးစက်မောင်းတဲ့သူဟာ ကြောက် လန့်လွန်းတဲ့ အတွက် စိတ်မူမမှန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင် မတ်တပ်တောင်မရပ်နိုင်တော့ပါဘူး "
" မြေတူးစက်မောင်းသမားဟာ အလွန်ကို ထိတ်လန့်ခဲ့တာကြောင့် နှလုံး တိုက်ခိုက်ခံရမှု ( Heart Attack) ရရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တော့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် " လို့ဆိုပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစိုးရထုတ် သတင်းစာတွေကတော့ မြွေကြီးအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် ရေးသား ခဲ့ကြပြီး ဓါတ်ပုံသတင်းတွေအရ အလွန်ကြီးမားတဲ့မြွေကြီးဟာ တကယ်တော့ ဒီဒေသဟာ သူ့ရဲ့ (စားကျက် )ကျက်စားရာနေရာမဟုတ် ပါဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် ။
မူရင်းဆိုက် - http://english.peopledaily.com.cn/
Posted by သက်တန့်ချို at 9:36 AM
မိုးခါး June 11, 2010 at 10:24 AM
မြွေကြီး သနားပါတယ် .. သူ့ဟာသူ နေနေတာကို .. ဟင်းးးးး
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ June 11, 2010 at 12:26 PM
ကြောက်စရာကြီး... ကိုယ်တိုင် ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ အဲလိုမျိုး heart attack ရနိုင်တယ်.... ;'(
ခိုင်နုငယ် June 11, 2010 at 2:08 PM
၅၅ ပေ (၁၆.၇ မီတာ)
မောင်ဘကြိုင် June 11, 2010 at 3:13 PM
ဟိုက် စွပ်ပြုတ်ချက်ရင် ကုန်မှာဟုတ်ဖူးး)
ချစ်ကြည်အေး June 11, 2010 at 8:28 PM
ဖားသားဖျော်ရည်၊ ဘာဘီကျူး နဲ့ အရှည်ဆုံးမြွေကြီးကို ဖတ်သွားတယ် ၊ မရောက်တာကြာလို့ လက်လှမ်းမီသလောက်လေး ဖတ်သွားပါတယ် သက်တန့်ရေ...:P
ရွှေရတုမှတ်တမ်း June 12, 2010 at 1:10 AM
ကျနော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့မြွေကြီးကတော့ သပိတ်ကျင်းနယ်မှာ Hino ranger ကားတစီးလောက်ရှည်တယ်၊ ပေ ၂၀ ကျော်လောက်ပေါ့
ဝက်ဝံလေး June 12, 2010 at 4:45 AM
မြွေကြီးသနားပါတယ်နော် မိသက် သူ့သူအိပ်နေတဲ့ဟာကိုနော် ဟွန့်
ဒါပေမယ့် ပြောထားတယ်နော် အဲဒီနေရာက အဲဒီမြွေတွေနေရမယ့် နေရာမဟုတ်ဘူးဆို ဒါဆိုထူးဆန်းတယ်နော် အေကန်န ကျွတ်လွတ်ချိန်တန်လို့ အဲဒီနေရာ ရောက်နေတာလားမသိဘူးနော် ဟီးးးးးးးးးးးလျှောက်တွေးသွားပါ၏
ပိုးဟပ်လေး June 12, 2010 at 7:05 AM
ဟရို့ လူတွေထက်တောင် အသက်ရှည်နေပါလား..
သန်းထိုက် June 18, 2010 at 8:53 PM
အာ လာ လား......! မနဲမနောကြီးပါလား..?
Kyi Phoo July 15, 2012 at 6:22 PM
ဟီး ဟီ ကြောက်စရာကြီး
kko November 17, 2012 at 12:15 AM
တော်တော်ကြီးတာပဲမွေကြီးက သူ့ ခမျာတစ်ယောက်တည်းသွားရတာသနားပါတယ်နော်....